DHAGEYSO:Mid ka mid ah soomaalida hantidooda lagu boobay Koonfur Afrika oo Star FM u warramay | Star FM
Home Wararka Soomaaliya DHAGEYSO:Mid ka mid ah soomaalida hantidooda lagu boobay Koonfur Afrika oo Star...
DHAGEYSO:Mid ka mid ah soomaalida hantidooda lagu boobay Koonfur Afrika oo Star FM u warramay
Dalka koonfur Afrika waxaa weli ka socdo dibadbaxyo rabshadeysan oo lagu boobayo hantida ganacsatada dalkaasi u shaqa tegay iyo kuwa u dhashay intabada.
Ilaa hadda waxaa la soo sheegay geerida afar wiil oo dhallinyaro soomaaliyeed ah oo halkaasi ku ganacsanayay.
Liibaan isdhaameel oo ka mid ah dhallinyarada soomaaliyeed ee magaalada Johannesburg ka shaqeeysanayey ayaa khadka taleefoonka ugu warramay wariyaha Star FM ee gobolka Galgaduud Cubeyd Xasan Maxamuud.
Waxaa uu ka warramayaa xaaladda soo wajahday ee saameysay ganacsigiisa waxaa uuna ku sugan yahay deegaan u dhow Johannesburg.
Previous articleIn ka badan 50 qof oo ku dhimatay dab laga soo tabiyay Ciraaq
Next articleDHAGEYSO:William Ruto oo sheegay in la siyaasadeeyay la dagaalanka musuqmaasuqa